ZvemukatiVerse: Gwaro Management uye Workflow Automation | Martech Zone
Mazhinji epasirose nyika ichiri kushandisa uye kuendesa zvirimo kuburikidza neMicrosoft Office mapuratifomu. Kana iwe uchida kuchengetedza vhezheni yekudzora magwaro ako uye otomhanyisa mafafafafita, zvinoita zvisingaite pasina yakanaka yekushambadzira otomatiki chishandiso uye gwaro repositi yekuchengetedza vhezheni uchibatana.
Masangano ekushambadzira - kunyanya nemaitiro ekushambadzira zvemukati - gadzira toni yezvirimo mune echinyakare desktop desktop Uye yekutsvagisa sisitimu yekushandisa haisi nguva dzose iri nyore nzira yekuwana magwaro, uyezve haina backups ndiyo nzira yakanyanya kunaka yekuzvichengeta. ZvemukatiVerse ndiyo imwe nzira isingadhuri, inobhadharwa pamushandisi, kuchengetedza, kutsvaga, kutsvaga nekuchengetedza zvinyorwa zvedu - zvisinei nekuti ndezvipi.
Gwaro Management - email, scan, dhonza-uye-kudonhedza, batch, kutora, yakananga kuchengetedza, tinya-kurudyi.
Rongedza zvemukati - mhenyu mhenyu nemarkups: zvirevo, kudzoreredzwa, zvidhindo zvetsika, mvumo, manotsi anonamira, zvakakosha, masiginecha emagetsi, makomenti.
Tsvaga & gadzirisa - Faira kutumidza zita uye kuchengetedza mune yakajairwa kufaira kabhineti uye dhairekitori chimiro, yakamisikidzwa yekukasira yakazara-zvinyorwa kutsvaga uye kudzosa.
Shandura zvirimo - Kugovera otomatiki kweruzivo nebasa rekusimbisa ziviso mune iyo GUI-based workflow.
Goverana zvemukati - Shanduko kumafaira dzinoteedzerwa musystem - yega vhezheni yeimwe faira riripo kuti riitwe.
Chenesa kana yave nguva - Ekuchengetedza marongero ekuti otomatiki abvise kana kuchengetera ruzivo rwisisina basa.
Tags: kuchengeteragwaro manejimendihofisisharepointversioningworkflow automation